कसरी भयो ? रुकुम घटना - Karnalipatra
कसरी भयो ? रुकुम घटना
कर्णालीपत्र संवाददाता १३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १४:३२
सुर्खेत, जेठ १३ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका एक आपसको छिमेकी पालिका हुन् । ती दुई पालिकाले जाजरकोट र रुकुम जिल्लालाई छुटाएको छ । त्यो छुटाउने सिमाना हो भेरी नदी । लामो समयदेखि यी दुई पालिकामा नागरिक बीचमा बिहेवारी पनि चल्ने गरेको छ ।
नजिक दुई पालिका बीच गत साल पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा रनिङ सिल्ड भयो । त्यो रनिङ सिल्डमा भाग लिनका लागि जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका १९ वर्षीय नवराज विक रुकुममा चौरजहारीमा पुगे । त्यही सुष्मा र विक बीच चिनापरिचय भयो । चिनचान मात्र भएन त्यो प्रेमका रुपमा परिणत भयो । प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएका उनीहरू विवाह गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यो उनीहरुका लागि सजिलो थिएन । फलाममा चिउरा सरह थियो । आखिर भयो पनि त्यही ।
मृतक बिकका बुवा मनलाल विकका अनुसार प्रेम सम्बन्धमा जोडिएको हप्ता दिनपछि केटी मल्ल आफ्नो घर आएको बताउँछन् । सानै उमेर र जात पनि नमिल्ने भएका कारणले सम्झाएर घर सुष्मालाई घर पठाएको बताए । ‘सुष्मालाई जात मिल्दैन, फेरि तिम्रो उमेर पनि सानो छ ।’ उनले भने,‘बालविवाह लाग्छ भन्दै सम्झाएका थिए ।’
गत पुसमा थाप्लेमा लाग्ने रमाइलो मेलमा पनि नवराज र सुष्मा बीच भेट भएको परिवारले बताउने गरेका छन् ।
नवराज बिक कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका एउटा खेलाडी थिए । उनी खेल खेल्नकै लागि मेला–महोत्सव जाने गर्दथे । खेल्नका लागि रुकुम पुग्दा नवराजले लुकिछिपी प्रेमिकालाई पनि भेट्थे । प्रेमिका पनि नवराजको घर आउने गर्थिन् । दलित युवासँग प्रेम सम्बन्ध छुटाउन आफन्तले निकै प्रयास गरे । योबीचमा अभिभावकले छोरीलाई कुटपिट पनि गरेका थिए ।
नवराज प्रेमिकालाई लिन केही महिनाअघि पनि नवराज साथीहरु रुकुम पुगेका थिए । त्यतिवेला प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको त्यहाँका स्थानीयहरु बताउँछन् ।
शनिबार केटीले बोलाएकी थिइन्
गत शनिबार नवराजलाई प्रेमिकाले बोलाएर बिहे गर्नका १९ जना साथीसहित रुकुम पुगेका थिए । रुकुममा स्थानीयहरुले आक्रमण गर्दा १९ जनामध्ये ६ जनाले नदीमा हाम फोलेर वेपत्ता भएका छन् ।
सोमबार साँझसम्म नवराज तथा उनका साथीहरु गणेश बुढामगर र टीकाराम नेपालीको शव भेटिएको रुकुम प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, भेरी नगरपालिकाका–४ का १८ वर्षे सञ्जु विक, १७ वर्षे गोविन्द शाही र १८ वर्षे लोकेन्द्र सुनार अझै बेपत्ता छन् ।
मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइने
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १४:३२
सुर्खेत, जेठ १३ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउने भएको छ । मध्यपक्षिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहज्यू र नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकाल बीच मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउने सहमति भएको हो । मंगलबार नगरपालिका र विश्व विद्यालयले […]
२ पुष २०७७, बिहीबार १६:५३
हिन्दूराष्‍ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित राप्रपाले संघर्ष गर्ने
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०८:३९
राउटे भन्छन्ः उपप्रधानमन्त्रीले खसी पठाएनन्
१३ भाद्र २०७७, शनिबार १२:१७
बिरालोको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि कोरोना संक्रमित मानिसमा प्रयोग गरिने
१ पुष २०७७, बुधबार १२:१७
अध्यादेशको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा ‘रीट’ दर्ता हुने
१४ भाद्र २०७७, आईतवार ११:२६
‘प्रचण्डसँग मन मिलिसक्यो, हात मिलाउन पाएको छैन’